eNasha.com - हल्ला बोलः हल्लै हुन सकेन
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको एउटा हाइफाइ रेष्टुराँमा एक दिनका लागि काम गर्ने मोडल जेसिका लालले अन्तिम समयमा रक्सी नदिएको झोंकमा हरियाणा राज्यका तत्कालिन मुख्य मन्त्री विनोद शर्माका छोरा मन्नु शर्माले गोली हानी हत्या गरे । पद, पैसा र पावरका कारण जेसिका लालको हत्या न्यायपालिकाको सबैभन्दा कुख्यात केस बन्न पुग्यो । यसमा सञ्चार माध्यमले यति गम्भीर भूमिका खेले कि जेसिका लालको हत्याले सात वर्षछि न्याय पायो । मन्नु शर्मालाई फाँसीको सजाय भयो र जेसिका लालको आत्माले शान्ति पायो । भारतमा पद, पैसा र पावरको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुराको गम्भीर बहस मात्र गराएन यो हत्याकाण्डले मिडियाले गम्भीरतापूर्वक चासो लियो भने लगभग हराइसकेको केसलाई पुनः चर्चामा ल्याएर न्याय दिलाउन सफल हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत पेश गर्‍यो ।
राजकुमार सन्तोषी, जो शुरुमा राम्रा सिने निर्माता/निर्देशकका रुपमा प्रख्याति कमाएका थिए- फ्लप सिनेमाको मालामा यसलाई पनि उनिदिए ।
समस्या प्रस्तुतिकरणमा छैन, कथामा छ । जहाँ समीर खान नामको एउटा चलचित्र नायक एउटा नाम नचलेकी केटीको हत्याका विरुद्धमा आवाज उठाउँछ ।
यो सिनेमाले बलिउडको दुइ मुखे प्रवृत्तिलाई नराम्रोसँग झापड हानेको छ । सडकबाट जनताले उसलाई महलमा पुर्‍याउँछन्, तर तिनै जनताको साना-साना कुरालाई उसले बिर्सिदिन्छ । ऊ दर्शकको हुन चाहन्छ, जनताको हुन चाहँदैन । यो वास्तविकता त त्यतिबेलै स्पष्ट भएको हो, जब आमिर खानले नर्मदा बचाओ आन्दोलनमा आफ्नो सानो सहभागिता जनाए । नतिजा यो भयो कि उनले खेलेको चलचित्र 'फना' गुजरात र वरपरका राज्यमा रिलिज हुन पाएन । अर्थात्, जसले सही कुरा बोल्न खोज्छ- उसमाथि ठूलो आपत् आइलाग्छ ।
सडकबाट उठेको समीर खान आज सुपरस्टार भइसक्दा उसको अन्तरआत्मा मरिसकेको छ र आफ्नै आँखाअघिल्तिर हत्या भएकी एउटी साधारण केटीको न्यायका लागि उसले कहीँ कतै पहल गर्दैन । किनभने ठूल्ठूला व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको यो हत्यामा 'टाङ' अडाउनु उसको फिल्मी करियर र पारिवारिक जीवनको अन्त्य गर्नु नै हुन जान्छ । तर अन्तरआत्माभन्दा ठूलो यस संसारमा केही हुँदैन । अन्तरआत्माकै कारणले ऊ त्यो पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन चाहन्छ, चाहे त्यसका लागि उसको करियर नै दाउमा किन लगाउनु नपरोस् ।
तर के कलाकारहरु, केही अपवादलाई छाडेर, जनताका समस्यामा बोल्न चाहन्छन् ? के उनीहरु आफ्नो करियरलाई दाउमा लगाउलान् ? बलिउडमा सञ्जय दत्त छन्, जो सन् १९९३ को मुम्बई बमकाण्डका दोषीहरुसँग घुमाउरो पाराले संगति रहेको पाइए । बलिउडमा सलमान खान छन्, जो सडकका खातेहरुमाथि गाडी चलाउने घटनामा दोषी देखिए । पद, पैसा र पावरका कारण तिनीहरु सर्वसाधारणझैँ हुन पाएनन्, तिनलाई कारवाही गर्नु प्रहरी, प्रशासन र न्याय विभागका लागि फलामको चिउरा साबित भए । दर्शकका देउताहरु 'गुनाहोंका देवता'मा परिणत भए । पर्दामा एउटा अभिनय र वास्तविक जीवनमा अर्को अभिनय बोकेर शरीर तानिरहेका बलिउडमा थुप्रै कलाकार छन्, जसलाई दर्शक भए पुग्छ- जनता चाहिँदैनन् ।
हल्ला बोल एउटा राम्रो विषयवस्तुको चलचित्र भए पनि पहिलो दिन नै फ्लप घोषित भयो । यसमा मुख्य कारण सिने नायक समीर खानको चरित्रसँग अजय देवगन फिट नभएकाले हो कि या अन्य कारण हो खोजीको विषय बनिरहेको छ । एनआरएनहरुको पूँजीमा बनेको यो चलचित्र चलिदिएको भए धर्मराउँदो अवस्थामा रहेको राजकुमार सन्तोषीको चलचित्र जीवनलाई केही शान्ति मिल्थ्यो होला, तर 'घायल'को सूत्र यहाँ अपनाउन खोज्दा उनी पुनः असफल भएका छन् ।
यो चलचित्र फ्लप हुनुले दुइटा कुरा स्पष्ट देखाएका छन् । एक, बलिउड सिनेमाका पर्दामा मात्र हिरो हुन सक्छ, वास्तविक जीनवमा त्यो हिरो बन्न सक्तैन । र, जो वास्तविक जीवनमा हिरो हुन्छ, ऊ पर्दामा हिरो रहिरहन सक्तैन । विवेक ओवरायलाई हेर्नुस्, उनी एक्टिङ जान्दैन थिए कि हेण्डसम थिएनन् कि, के थिएन उनमा ? सुनामीले सखाप पारेको सामुद्रिक किनारका पीडित जनतालाई राहत बाँढ्न उनले कर्न्र्सट गरे, कार्यक्रम गरे । बलिउडमा उनको वाहवाही भयो तर उनको करियर डामाडोल ! नाना पाटेकर पनि त्यही वर्गमा पर्छन् ।
जो झन्झटमा फँसेन, त्यसको करियरको आयु लामो भयो । शायद यही कुरा बुझेर नै बलिउडियाहरु खासगरी राजनीतिक कन्ट्रोभर्सीमा फँस्न चाहँदैनन् ।
तर सिनेमा हेरिसकेपछि के लाग्छ भने लेखक निर्देशक सन्तोषीले विषय चाहिँ राम्रै उठाएका हुन्, तर गलत पात्र मार्फत् ।
रिलिज हल्ला अभिनेता प्रविधि सेक्स सेलेब्रिटी समारोह सुटिङ पेज थ्री अभिनेत्री